Fanimbana ala :: Migadra ny depiote teo aloha iray sy ny zanany lahy • AoRaha
Fanimbana ala Migadra ny depiote teo aloha iray sy ny zanany lahy
Nivoaka ny alatsinainy teo ny didim-pitsarana tamin’ny raharaha maha­voasaringotra an-dRaveloson Ludovic na i Leva, solombavambahoaka teo aloha, tany Mahabo. Voaheloka dimy taona an-tranomaizina sazy mihatra miampy fando­avana onitra izy. Voasazy higadra telo taona miampy fandoavana onitra telo tapitrisa ariary kosa ny zanany lahy iray.
Raharaha fanimbana ala tao amina faritra arovana Menabe Antimena sy fana­raraotam-pahefana ary fitrandrahana ala tsy ara-dalàna no nitsarana an-dRaveloson Ludovic, araka ny nambaran’ ny loharanom-baovao avy eo anivon’ny Fitsarana, any Morondava. Ankoatra azy, nahazo sazy fampidirana an-tranomaizina ihany koa ny olona roa hafa voatondro ho namany. Noho ny fandro­bana entam-barotra indray no nanenjehana ny zanany lahy.
Samy voatazona am-ponja vonjimaika izy mianaka ireo, nanomboka ny volana avrily lasa teo, mialoha ny niaka­ran’izy ireo Fitsarana, tany Morondava, tamin’ny alatsinany. «Tamin’ny fito ora alina vao tapitra ny fitsarana azy mianaka. Olona an-jatony no tonga nanatrika izany», araka ny fampitam-baovao avy any Morondava.
Fantatra fa mbola maro ny raharaha hatrehin’ity depiote teo aloha ity eny amin’ny Fitsarana, toy ny vono olona nahafatesana mpirahalahy, tamin’ny taona 2016. Tsy mbola voafaritra ny fotoam-pitsarana izany. Mbola nilatsaka hofidiana izy farany teo ary nitarika vonjimaika tamin’ny tahana isam-bato 32, 02 %.
Ahiahy kolikoly :: Voasariky ny polisy vao maraina tao Paris i Ahmad